RASMI: Pirlo Oo Xaqiijiyey In Ciqaabtii Buffon Oo Diinta Aflagaaddeeyey Iyagana La Marsiinayo Arthur, Dybala Iyo McKennie - Laacib
HomeSerie ARASMI: Pirlo Oo Xaqiijiyey In Ciqaabtii Buffon Oo Diinta Aflagaaddeeyey Iyagana La Marsiinayo Arthur, Dybala Iyo McKennie
RASMI: Pirlo Oo Xaqiijiyey In Ciqaabtii Buffon Oo Diinta Aflagaaddeeyey Iyagana La Marsiinayo Arthur, Dybala Iyo McKennie
April 2, 2021 Abdiwahab Ahmed Serie A, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus ee Andrea Pirlo ayaa daboolka ka qaaday in ay ciqaabayaan saddexda ciyaartoy ee Arthur, Paulo Dybala iyo Weston McKennie oo aanay ciyaari doonin kulanka Torino ee toddobaadkan, taas oo sidoo kale uu seegayo goolhaye Gianluigi Buffon oo lagu ganaaxay aflagaaddo uu u geystay diinta.
Sida uu qoray wargeyska La Stampa booliska ayaa Talyaaniga ayaa Arbacadii galay guriga McKennie oo ay ka socotay xaflad ay ka qayb-galeen dad tiradoodu u dhaxaysay 10-20, halkaasna ay ka socotay xaflad baadhi ahayd oo uu laacibkani qabsaday.
Tababare Andrea Pirlo oo ka hadlay xaaladda ciyaartoygan ayaa sheegay in ay jabiyeen sharciga xakamaynta xanuunka Korona Fayras, sidaas darteedna ay ganaax hal kulan ah kooxdu saartay si la mid ah Gianluigi Buffon oo isagana xidhiidhku ganaaxay.
Juventus oo toban dhibcood ka dambaysa Inter Milan oo hoggaanka haysa hal ciyaar ahina baaqi u tahay, ayay dhibaato ku tahay in ay ka maqnaadaan Arthur, Paulo Dybala iyo Weston McKennie, laakiin waxa uu Pirlo sheegay in ka hor ciyaarta uu la hadli doono ciyaartoydiisa, waxaanu yidhi: “Berri aad ayay muhiim noogu tahay, waxaananu la hadli doonaa qof walba ka hor ciyaarta si aanu qaabka ugu wanaagsan ugu waajihi karno. Waxba iskama kaaya beddelin, waxaananu mar walba u ciyaaraynaa si aanu u guuleysano.”
Alex Sandro ayaa taam u noqday Juventus, waxaanay taasi siinaysaa fursad uu Danilo kaga ciyaarsiin karo difaaca ama dhexda.
Torino ayaa iyaduna u dagaallami doonta guul ciyaartan iyagoo 29kii jeer ee ugu dambeeyey ee ay Juventus oo ay isku magaalo yihiin ay iska hor yimaaddeen hal mar oo kaliya guuleysatay, waxaana hadda u raacda in ay ku jiraan kaalinta 17aad oo ay qarka u saaran yihiin khadka cas.
Difaaca Talyaaniga ah ee Leonardo Bonucci iyo Merih Demiral ayaa iyaguna ciyaartan ka maqan waxaana ku dhacay Korona Fayras oo laga helay intii ay ku maqnaayeen ciyaaraha caalamiga ah.